Lapho usuthathe isinqumo sokuyisebenzisa | Ota Bunkanomori
Lapho usebenzisa ihholo, igumbi elenzelwa imisebenzi eminingi, igumbi lokubukisa kanye neplaza
Ngokuyinhloko amadokhumende alandelayo kusasele inyanga eyodwa ngaphambi kwethemba lokuthi kusetshenziswe usuku ngemuva kokuthi eze, sicela uye kumlindi kanye nemihlangano eyanele.
Uhlelo noma ishadi lokuqhubeka, amapheshana, amathikithi okungena noma amathikithi afakwe izinombolo (njengesampula)
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, imicimbi esehholo (XNUMX) umdwebo wokulungiselela isigaba, (XNUMX) umdwebo wokulungiselela ukukhanyisa, kanye (XNUMX) nomdwebo wokulungiselela i-acoustic.
(Uma ukhishelwe ngaphandle kosonkontileka, sicela usazise igama losonkontileka nemininingwane yokuxhumana naye.)
Lapho usebenzisa igumbi lomhlangano, i-workshop yokudala, noma isitudiyo
Uyacelwa ukuthi wazise ideski langaphambili mayelana nokwakheka kwangaphakathi nezinsiza ezihambisanayo okungenani ezinsukwini ezimbili ngaphambi kosuku lokusetshenziswa.
Ngokuya ngokusetshenziswa okuhlosiwe, singakucela ukuthi ube nomhlangano nabasebenzi.
Njengomthetho ojwayelekile, izimpahla azikwazi ukuthengiswa ezitudiyo nasezikhaleni ezivulekile.
Ukusetshenziswa komlilo, njll. Isigaba Sokuvikela Umnyango Wezomlilo i-Omori
1-32-8 Omorihigashi, Ota-ku, Tokyo Ucingo: 03-3766-0119
Ezokuphepha njll. Isiteshi Samaphoyisa i-Omori
1-1-16 Omorinaka, Ota-ku, Tokyo Ucingo: 03-3762-0110
Ukuphathwa kokudla Isikhungo Sezempilo sase-Ota Ward Inhlanzeko Ephilayo Ukuhlanzeka Kokudla
1-12-1 Omorinishi, Ota-ku (6th floor of Omori Regional Government Building) Ucingo: 03-5764-0691
Imininingwane ngemicimbi ingathunyelwa mahhala kumamagazini wolwazi akhishwa yi-Ota Ward Cultural Promotion Association nakuwebhusayithi. (Ngokuya ngokuqukethwe, sizobukeza kusengaphambili.)
Ngosuku lokusetshenziswa, sicela wethule ifomu lokuvunyelwa ukusetshenziswa endaweni yokwamukela abantu esitezi sokuqala ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Uma kwenzeka inhlekelele, sicela uthathe zonke izinyathelo ezikhona zokuqondiswa kokuphuma, ukuxhumana okuphuthumayo, kanye nosizo lokuqala lwezivakashi.
Sicela uhambe nodoti wakho lapho udla noma uphuza, noma uma uwusebenzisa.Uma kunzima ukuyisa ekhaya, sizoyicubungula ngemali ethile, ngakho-ke sicela usazise.
Umhleli unesibopho sokuhlela nokuqondisa izivakashi, ukubamba, nokujabulisa.Uma kulindeleke ukuthi inani elikhulu lezivakashi lizofika ngaphambi kwesikhathi sokuvula, noma uma kungenzeka kube nokudideka ngesikhathi somcimbi, kungumsebenzi womhleli ukwaba abahleli abenele.
Ngokuya ngomcimbi, umhleli uzolungiselela abasebenzi inkundla, ukukhanyisa, umsindo, njll.
Ungadli, ungaphuzi noma ungabhemi ngaphandle kwasezindaweni eziqokiwe
Ukusetshenziswa kwegumbi lapho kungenzeka kube khona izinto zokuthwala / zokuqhuba, sizokunikeza ithikithi lokususa indawo yokupaka mahhala kuphela ngosuku lokusebenzisa.Sicela ubuze abasebenzi mayelana namakamelo angasatshalaliswa kanye nenani lezabelo.
Indawo yokupaka inomkhawulo wokuphakama ongu-2.8m nobude obungu-5m.Qaphela ukuthi.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende ajwayelekile, abanye abasebenzisi bamakamelo, nalabo abadlula inani lokusatshalaliswa bazokhokhiswa imali.
Sicela ungene usuka emnyango ongaphambili esitezi sokuqala ngaphandle kwezitebhisi, ithambeka emnyango wokungena ongemuva, noma indawo yokupaka esitezi sokuqala esingaphansi.Sicela usebenzise ikheshi ukufinyelela igumbi ngalinye.
Izindlu zangasese ezifinyeleleka ngezihlalo ezinamasondo (indlu yangasese yanoma ngubani) zitholakala esitezi ngasinye esakhiweni somhlangano nasehholo (isitezi sokuqala, igumbi lokugqoka).